Krita 4.4.8 anosvika kuzogadzirisa tsaona paunenge uchichengetedza mu .kra fomati | Linux Vakapindwa muropa
Krita 4.4.8 anosvika kuzogadzirisa tsaona paunenge uchichengetedza mu .kra fomati uye imwe shanduko muWindows
Iwo madhizauro anosunungurwa kugadzirisa bugs, uye ndizvo zviri kuitwa neKDE nehurongwa hwayo hwakagadzirwa uye uye nevanoita zvemifananidzo. Iyo yapfuura 4.4.7 yakagadzika 7 bugs, uye Krita 4.4.8 auya kuzogadzirisa mamwe maviri chete. Kuburitswa uku kunouya nguva pfupi yadarika purojekiti yaburitsa iyo Krita 5 Beta, saka zvine musoro kuti ivo vari kutarisisa kuburitswa kunotevera, izvo hazvireve kuti vari kuzosiya izvo zviripo nemagirazi anotsamwisa.
Uye ndezvekuti mune ipfupi runyorwa rwemashoko, inova ndima ine shanduko mbiri, a bhagi iro rakaita kuti zvikone kuchengetedza faira se .kra, izvo zvinogona kukonzeresa kurasikirwa kwe data. Kurasa ruzivo haisi diki diki, saka KDE yakafunga kuburitsa iyi yekuvandudza kuti igadzirise.
Chii chitsva muKrita 4.4.8
Izvi ndezvechokwadi bhagi-gadziriso vhezheni. Pane shanduko mbiri: isu takagadzirisa nyaya kana tichichengeta .kra faira ine paletti yakadzika, iyo inogona kutyora nekukonzeresa kurasikirwa kwedata, uye neWindows, rutsigiro rwezvikamu zveHiDPI zvekuyera screen zvino zvoremara nekutadza.
Ino nguva hakuna kumbove nekuburitswa kwepakati kwekutora kune chero chitoro senge Epic's, chimwe chinhu chakaitika mushanduro 4.4.6 uye 4.4.4. Kunze kwezvitoro, Krita 4.4.8 ikozvino iripo kune ese masisitimu akatsigirwa kubva kune yako kurodha peji. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kurodha pasi AppImage, asi kune zvakare repository inowanikwa yeUbuntu (https://launchpad.net/~kritalime/+archive/ubuntu/ppa) uye ivo vanotipa chinongedzo chekutora chirongwa ichi kubva kuFlathub, kunyangwe panguva yekunyora pasuru flatpak iri mu v4.4.3. Kunyangwe zvisina kutaurwa ipapo, inowanikwawo se snap kurongedza, asi haina kugadziridzwa kune iyi vhezheni futi, saka izvozvi inogona kushandiswa chete kubva kune yayo yepamutemo AppImage kana PPA.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Krita 4.4.8 anosvika kuzogadzirisa tsaona paunenge uchichengetedza mu .kra fomati uye imwe shanduko muWindows
Nhasi Linux Kernel inopemberera yayo makumi matatu emakore uye ichine zvakawanda zvekupa
Kubudirira: mutambo wevhidhiyo une kusunungurwa kutsva uye nhau